ဟားလနျးအတှကျ ရိုငျယိုလာရဲ့ ခှငျထဲ တိုးဝငျလာမယျ့သူက ဘယျခနျြပီယံအသငျးဖွဈမလဲ – Sports A2Z
ဟားလနျးအတှကျ ရိုငျယိုလာရဲ့ ခှငျထဲ တိုးဝငျလာမယျ့သူက ဘယျခနျြပီယံအသငျးဖွဈမလဲ
ခြဲလျဆီးအသငျးကတော့ အသငျးရဲ့ အဓိကပဈမှတျအဖွဈ ဒေါ့မှနျတိုကျစဈမှူး အာလငျး ဟားလနျးကို ပေါငျသနျး ၁၅၀ နဲ့ ချေါယူနိုငျမယျလို့လညျး လနျဒနျအခွစေိုကျကလပျက ယုံကွညျ‌နပွေီး ယူရိုစပို့ဈရဲ့ အဆိုအရ ဇှနျလတုနျးက ခြဲလျဆီးက ဟားလနျးနဲ့ သဘောတူညီမှုရခဲ့တယျလို့လညျး သတငျးထှကျပျေါလာခဲ့ပါတယျ။
လိုခငျြတဲ့ကစားသမားကို ဟိုးအရငျကတညျးက အရချေါတတျတဲ့ အသငျးပိုငျရှငျ ရိုမနျ အဘေရာမိုဗဈချအြတှကျလညျး အရငျလို ချေါခငျြတဲ့ ကစားသမားကို ငှပေုံပေးပွီး ချေါဖို့မလှယျတော့တဲ့ ဘဏ်ဍာရေးစညျးမဉျြးတှကွေောငျ့ ၂၀၁၉ တုနျးကလို အပွောငျးအရှေ့ အပိတျခံရမှာစိုးလို့ အသငျးက ပိုလြှံကစားသမားတှကေို ထုတျရောငျးဖို့ အပွောငျးအရှအေ့ကွီးအကဲ မာရီနာ ဂရာနော့ဗျစကားယာက ဦးစားပေးလုပျဆောငျနတောပါ။
ဘဏ်ဍာရေးစညျးမဉျြးနဲ့လှတျအောငျ ဟာကငျးမျ ဇီးယကျရျှ၊ အိုလီ‌ဗီးယေး ဂရြူး၊ တမျမီ အဘေရာဟမျ၊ အီမာဆနျ ပါလျမီယာရီ၊ ဟဒျဆနျ-အိုဒှိုငျး၊ မဈခြီ ဘကျရှာယီ အစရှိတဲ့ ပိုလြှံကစားသမားတှေ အကုနျလုံးကို ရောငျးထုတျပွီး ပေါငျသနျး ၁၀၀ လောကျရဖို့ မြှျောလငျ့နသေလို ဟားလနျးကို အရချေါယူဖို့ ငှဖေျောနလေို့ ကွာနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
မနျခကျြစတာစီးတီးနညျးပွ ပကျပျ ဂှါဒီယိုလာကတော့ ခြဲလျဆီးအသငျးအနနေဲ့ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈအနညျးငယျက အလကျဆဈဆနျးခကျြဇျကို တဈပတျ ပေါငျ ၅၆၀,၀၀၀ အထိ ပေးချေါပွီး အသငျးက ကစားသမားကောငျးတှကေိုပါ လစာလိုကျတိုးပေးခဲ့ရတဲ့ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျလိုမြိုး ဖွဈမှာ စိုးရိမျတယျဆိုပွီး ဘဏ်ဍာရေးအခွအေနကေို သတိပေးခဲ့ပါတယျ။
သတိပေးပွီး မကွာမီမှာပဲ သူက ဟာလနျးကို အသငျးမှာ လိုခငျြတယျဆိုပွီး အသငျးပိုငျရှငျတှကေို အသိပေးခဲ့တာကွောငျ့ ဟားလနျးကို ပေါငျသနျး ၁၀၀ ကြျောပေးမယျ့ ပွိုငျပှဲက ခြဲလျဆီးတဈသငျးတညျး မဟုတျတော့ပဲ အဈတီဟတျသားတှရေော ပါဝငျလာခဲ့တာဖွဈသလို ပေါငျသနျး ၁၃၀ အထိ ပွောငျးရှကွေ့ေးကိုပေးဖို့ ပွငျဆငျလာခဲ့တာပါ။
ဆာဂြီယို အဂှရေို မရှိတော့ခြိနျမှာ ကနျြတဲ့ တိုကျစဈမှူး ဂါဘရီယဲလျ ဂဆြေူးကိုလညျး အားမရတဲ့အတှကျ မနျစီးတီးအနနေဲ့ ဟားလနျးဘကျ လှညျ့လာပွီး မကွာမီ ရီယကျ မာရကျဇျကလညျး နျောဝေးသားနဲ့အတူရှိနခေဲ့တာကို တှဈတာမှာ အေးဂငျြ့ မာရကျဇျ ရောကျရှိဆိုပွီး တငျခဲ့လို့ မနျခကျြစတာသား‌တှအေတှကျ မြှျောလငျ့စရာဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ဟားလနျးကို လကျရှိ ဒေါ့မှနျရဲ့ လကေ့ငျြ့ရေးအစီအစဉျမှာလညျး မတှခေဲ့ရသလို အင်ျဂလနျကို ရောကျနပွေီလို့လညျး သတငျးတှေ ထှကျပျေါလာတာကွောငျ့ လနျဒနျနဲ့ မနျခကျြစတာ ဘယျကိုလဲလို့ မေးခှနျးတှေ အဆကျမပွတျထှကျပျေါလာခဲ့တာကလညျး နှဈရကျလောကျပဲ ကွာပါသေးတယျ။
ဟာလနျးရဲ့ အေးဂငျြ့ မီနို ရှိုငျအိုလာကတော့ သူ့ကစားသမားကို ချေါမယျ့အသငျးက စာခြုပျပါလြျောကွေးမထညျ့ရငျ စာခြုပျမခြုပျဖို့ သတိပေးထားသလို ကစားသမားကို ပွောငျးရှကွေ့ေး မတကျတကျအောငျ အသငျးခဏခဏပွောငျးမယျ အသံထှကျပွီး အသငျးပွောငျးတာနဲ့ ကျောမရှငျခ အမြားကွီးယူတတျတဲ့သူ ပီသစှာနဲ့ပဲ ဒီတဈကွိမျမှာလညျး ယူရိုသနျး ၄၀ အထိ ရယူလိုနတောပါ။
မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျ ကှငျးလယျလူ ပေါလျ ပေါ့ဘာကိုလညျး အဲ့ဒီနညျးနဲ့ပဲ အသငျးပွောငျးအောငျ ကလိပေးပွီး ကျောမရှငျခပိုကျဖို့ ခှငျကွီးကွီးဆငျနသေလို ဟာလနျးရဲ့ အပွောငျးအရှမှေ့ာတော့ ဘယျအသငျးကွောငျ့ ယူရို သနျး ၄၀ ကို ရှိုငျအိုလာရသှားမလဲ? ဟာလနျးသှားမှာက ပရီးမီးယားလိဂျခနျြပီယံကိုလား ခနျြပီယံလိဂျခနျြပီယံကိုလား ဆိုတာကတော့…
ZAWGYI: ချဲလ်ဆီးအသင်းကတော့ အသင်းရဲ့ အဓိကပစ်မှတ်အဖြစ် ဒေါ့မွန်တိုက်စစ်မှူး အာလင်း ဟားလန်းကို ပေါင်သန်း ၁၅၀ နဲ့ ခေါ်ယူနိုင်မယ်လို့လည်း လန်ဒန်အခြေစိုက်ကလပ်က ယုံကြည်‌နေပြီး ယူရိုစပို့စ်ရဲ့ အဆိုအရ ဇွန်လတုန်းက ချဲလ်ဆီးက ဟားလန်းနဲ့ သဘောတူညီမှုရခဲ့တယ်လို့လည်း သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
လိုချင်တဲ့ကစားသမားကို ဟိုးအရင်ကတည်းက အရခေါ်တတ်တဲ့ အသင်းပိုင်ရှင် ရိုမန် အေဘရာမိုဗစ်ခ်ျအတွက်လည်း အရင်လို ခေါ်ချင်တဲ့ ကစားသမားကို ငွေပုံပေးပြီး ခေါ်ဖို့မလွယ်တော့တဲ့ ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းတွေကြောင့် ၂၀၁၉ တုန်းကလို အပြောင်းအရွှေ့ အပိတ်ခံရမှာစိုးလို့ အသင်းက ပိုလျှံကစားသမားတွေကို ထုတ်ရောင်းဖို့ အပြောင်းအရွှေ့အကြီးအကဲ မာရီနာ ဂရာနော့ဗ်စကားယာက ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်နေတာပါ။
ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းနဲ့လွတ်အောင် ဟာကင်းမ် ဇီးယက်ရှ်၊ အိုလီ‌ဗီးယေး ဂျရူး၊ တမ်မီ အေဘရာဟမ်၊ အီမာဆန် ပါလ်မီယာရီ၊ ဟဒ်ဆန်-အိုဒွိုင်း၊ မစ်ချီ ဘက်ရွှာယီ အစရှိတဲ့ ပိုလျှံကစားသမားတွေ အကုန်လုံးကို ရောင်းထုတ်ပြီး ပေါင်သန်း ၁၀၀ လောက်ရဖို့ မျှော်လင့်နေသလို ဟားလန်းကို အရခေါ်ယူဖို့ ငွေဖော်နေလို့ ကြာနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မန်ချက်စတာစီးတီးနည်းပြ ပက်ပ် ဂွါဒီယိုလာကတော့ ချဲလ်ဆီးအသင်းအနေနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်က အလက်ဆစ်ဆန်းချက်ဇ်ကို တစ်ပတ် ပေါင် ၅၆၀,၀၀၀ အထိ ပေးခေါ်ပြီး အသင်းက ကစားသမားကောင်းတွေကိုပါ လစာလိုက်တိုးပေးခဲ့ရတဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်လိုမျိုး ဖြစ်မှာ စိုးရိမ်တယ်ဆိုပြီး ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေကို သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
သတိပေးပြီး မကြာမီမှာပဲ သူက ဟာလန်းကို အသင်းမှာ လိုချင်တယ်ဆိုပြီး အသင်းပိုင်ရှင်တွေကို အသိပေးခဲ့တာကြောင့် ဟားလန်းကို ပေါင်သန်း ၁၀၀ ကျော်ပေးမယ့် ပြိုင်ပွဲက ချဲလ်ဆီးတစ်သင်းတည်း မဟုတ်တော့ပဲ အစ်တီဟတ်သားတွေရော ပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်သလို ပေါင်သန်း ၁၃၀ အထိ ပြောင်းရွှေ့ကြေးကိုပေးဖို့ ပြင်ဆင်လာခဲ့တာပါ။
ဆာဂျီယို အဂွေရို မရှိတော့ချိန်မှာ ကျန်တဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဂါဘရီယဲလ် ဂျေဆူးကိုလည်း အားမရတဲ့အတွက် မန်စီးတီးအနေနဲ့ ဟားလန်းဘက် လှည့်လာပြီး မကြာမီ ရီယက် မာရက်ဇ်ကလည်း နော်ဝေးသားနဲ့အတူရှိနေခဲ့တာကို တွစ်တာမှာ အေးဂျင့် မာရက်ဇ် ရောက်ရှိဆိုပြီး တင်ခဲ့လို့ မန်ချက်စတာသား‌တွေအတွက် မျှော်လင့်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဟားလန်းကို လက်ရှိ ဒေါ့မွန်ရဲ့ လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်မှာလည်း မတွေ့ခဲ့ရသလို အင်္ဂလန်ကို ရောက်နေပြီလို့လည်း သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာတာကြောင့် လန်ဒန်နဲ့ မန်ချက်စတာ ဘယ်ကိုလဲလို့ မေးခွန်းတွေ အဆက်မပြတ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကလည်း နှစ်ရက်လောက်ပဲ ကြာပါသေးတယ်။
ဟာလန်းရဲ့ အေးဂျင့် မီနို ရွိုင်အိုလာကတော့ သူ့ကစားသမားကို ခေါ်မယ့်အသင်းက စာချုပ်ပါလျော်ကြေးမထည့်ရင် စာချုပ်မချုပ်ဖို့ သတိပေးထားသလို ကစားသမားကို ပြောင်းရွှေ့ကြေး မတက်တက်အောင် အသင်းခဏခဏပြောင်းမယ် အသံထွက်ပြီး အသင်းပြောင်းတာနဲ့ ကော်မရှင်ခ အများကြီးယူတတ်တဲ့သူ ပီသစွာနဲ့ပဲ ဒီတစ်ကြိမ်မှာလည်း ယူရိုသန်း ၄၀ အထိ ရယူလိုနေတာပါ။
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ကွင်းလယ်လူ ပေါလ် ပေါ့ဘာကိုလည်း အဲ့ဒီနည်းနဲ့ပဲ အသင်းပြောင်းအောင် ကလိပေးပြီး ကော်မရှင်ခပိုက်ဖို့ ခွင်ကြီးကြီးဆင်နေသလို ဟာလန်းရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့မှာတော့ ဘယ်အသင်းကြောင့် ယူရို သန်း ၄၀ ကို ရွိုင်အိုလာရသွားမလဲ? ဟာလန်းသွားမှာက ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံကိုလား ချန်ပီယံလိဂ်ချန်ပီယံကိုလား ဆိုတာကတော့…